कोरोना भाइरसले सिध्याएको फोक्सो फेरियो, शल्यक्रिया सफल — Paschimnews.com News From Nepal
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/२/३० गते
अमेरिकामा कोरोना संक्रमित एक विरामीको फोक्सो प्रत्यारोपण सफल भएको छ । शिकागोस्थित नर्थवेस्टर्न मेडिसिन अस्पतालमा कोरोना संक्रमित एक युवतीको फोक्सो प्रत्यारोपण सगरिएको हो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण फोक्सो काम नलाग्ने भएपछि फोक्सो प्रत्यारोपण गरिएको हो । भारतीय मुलका फोक्सो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर अंकित भारतको टिमले यो शल्यक्रिया गरेको हो ।
कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि संक्रमित विरामीमा फोक्सो प्रत्यारोपण गरिएको यो पहिलो पटक हो । डा. अंकितका अनुसार २० बर्षीया युवतीको फोक्सो प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
उनका अनुसार यो अप्रेशन सम्पन्न हुन १० घण्टा लागेको थियो । चिकित्सा क्षेत्रमा यो समयलाई औसत भन्दा बढी मानिन्छ । फोक्सो प्रत्यारोपण गर्ने टिमको नेतृत्व गरेका डा. अंकित भारतले बताए, ‘विरामीको फोक्सो पुरै काम नलाग्ने भएको थियो ।
मुटु र छातीको भित्री भित्ता तथा यी सबै अंगहरुलाई छोप्ने मांशपेसीको पातलो झिल्लीका कोशिकाहरु पुरै सुकेका थिए । कोरोना भाईरसको अधिक संक्रमणका कारण फोक्सो काम नलाग्ने भएको थियो । यो अवस्थालाई एन्टीबायोटिक औषधिले पनि निको पार्न सकिंदैन ।’
डा.अंकितका अनुसार विरामीको जीवन बचाउन फोक्सो प्रत्यारोपण बाहेक अरु उपाय थिएन । यो अप्रेशनका लागि विरामीले २ दिन प्रतिक्षा गर्नुपरेको थियो ।
किनकी दुई दिन पछि मात्रै मस्तिष्क मृत्यु भएका फोक्सो दान गर्ने ब्यक्ति भेटिएका थिए । यसअघि पनि अस्ट्रेलियामा ४५ बर्षीया एक महिलाको फोक्सो प्रत्यारोपण गरिएको थियो । तिनको पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण फोक्सो फेल भएको न्युयोर्क टाईम्सले जनाएको छ ।